HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Chichewa Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Isoko Italianina Japoney Kinyarwanda Kirundi Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tiorka Tseky Tsonga Xhosa Zoloa
SELTERS, any Alemaina—Notokanana tany Lautertal-Reichenbach ny tsangambato ahatsiarovana an’i Max Liebster, tamin’ny 21 Jona 2013. Vavolombelon’i Jehovah izy ary nigadra nandritra ny dimy taona mahery tany amin’ny toby fitanan’ny Nazia. Notokanan’ny ben’ny tanàna sy ny manam-pahefana hafa ilay tsangambato, ary nanatrika teo koa ny mponina teo an-toerana sy Simone Liebster, vadin’i Max Liebster, izay Vavolombelon’i Jehovah koa.
Jiosy i Liebster ary nipetraka tany Alemaina nandritra ny fitondran’i Hitler. Nosamborin’ny polisy izy tamin’ny 1939, ary nijalijaly tany amin’ny toby fitanana dimy: Sachsenhausen, Neuengamme, Auschwitz, Buna, ary Buchenwald. Maty tany amin’ny toby fitanana ny valo tamin’ny havany, anisan’izany ny rainy. Izy mihitsy no nibata ny vatana mangatsiakan’io rainy io nankany amin’ny fandoroana faty tao Sachsenhausen.
Ninamana tamin’ny Vavolombelon’i Jehovah niara-nigadra taminy tany amin’ny toby fitanana i Liebster. Natao batisa izy rehefa nafahana tamin’ny 1945, ka lasa Vavolombelon’i Jehovah. Voalaza eo amin’ny takelaka halimo iray eo amin’ireo tsangambato fa ny finoany no tsy nahafaty azy sy nahatonga azy tsy haniry ho faty. Tamin’ny 2008 izy vao nodimandry, teo amin’ny faha-93 taonany.
Voalaza tao amin’ny taratasy fanasana tamin’ilay fitokanana hoe “resy lahatra tanteraka [i Liebster] fa afaka manampy olona hanana toetra faran’izay tsara ny fampianarana kristianina.” Hoy i Wolfram Slupina, mpitondra tenin’ny Vavolombelon’i Jehovah any Alemaina: “Faly izahay hoe tsarovana ny herim-pon’ny mpiray finoana aminay, izay nijoro tamin’ny heviny na dia nenjehina noho ny fivavahany aza. Porofoin’ireo tsangambato ireo fa mahavita mandrisika ny olona ho tia fihavanana sy hiray saina ny Baiboly, ary izany indrindra no ezahin’ny Vavolombelon’i Jehovah atao.”